Somaliland oo heshiis kale la gashay Imaaraadka Carabta – Balcad.com Teyteyleey
Heshiiskan ayaa ka dhacay Hotel Intercontinental ee magaalada Abu Dhabi. Heshiiska cusub waxaa lagu caddeeyey dhismaha waddo isku xirta Berbera iyo Itoobiya taas oo loogu yeero (Berbera Corridor). Sidoo kale heshiiska cusub ayaa lagu sheegay in ay kamid tahay dhismaha garoon caalami ah oo laga dhiso magaalada xeebta ah ee Berbera.
War ka soo baxay madaxtooyada Somaliland oo nuqul kamid ah soo gaarey Horseed Media ayaa lagu yiri.
“Heshiiskan ayaa noqon doona mid wax weyn ka tari doona kaabayasha dhaqaale ee Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana kor u qaadidoona isticmaalka dekadda Berbera iyo ganacsiga soo jireenka ah eek a dhexeeya labada dawladood ee Itoobiya iyo Somaliland, sidoo kalena hor seedi doona shaqo abuur”.
Warka ka soo baxay Madaxtooyada Hargeysa ayaa lagu sheegay in heshiiskan uu Somaliland u saxiixay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, laakiin laguma sheegin dhanka Imaaraadka Carabta cidda u saxiixday.
Horay ayaa Somaliland heshiis ula gashey Shirkadda Dhismayaasha dekadaha DP World, waxaana lagu wareejiyey Dekadda Berbera, sidoo kale waxaa jira heshiis muran badan dhaliyey oo aan weli fulin kaas oo Dowladda Imaaraadka Carabtu ay saldhig Milteri uga dhiseyso magaalada xeebta ah ee Berbera.
Heshiiska Berbera Corridor iyo dhismaha garoonka cusub ee Berbera ayaa la aaminsan yahay in uu kor u dhaafi doono hal bilyan oo dollarka Maraykanka ah.
Somaliland ayaa dhawaan sheegtey in ay xiriirka u jartey dalka Qatar, iyada oo aysan jirin dal kamid ah kuwa caalamka oo u aqoonsan Jamhuuriyad iskeed u taagan, sidoo kale Qatar ayaan ku lahayn wax qunsuliyad ah Hargeysa, waxaana loo arkey goaankaas mid ay uga hor imaaneyso goaanka Dowladda federaalka Soomaaliya ee ay dhex dhexaadka uga noqotey muranka dalalka Khaliijka, dadka qaar ayaa ku tilmaamey goaanka aan saameynta lahayn ee Somaliland kula caadifootey Xulafada Sucuudiga mid ay ku ilaalineyso danaha ganacsi iyo taageer dhaqaale.
The post Somaliland oo heshiis kale la gashay Imaaraadka Carabta appeared first on Ilwareed Online.